Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Hafanàm-po nomerika tamin’ny Avrily 2017
Hafanàm-po nomerika · Avrily, 2017
Tantara mikasika ny Hafanàm-po nomerika tamin'ny Avrily, 2017
11 Avrily 2017
Satria Mihamafy Ny Fihetsiketsehana, Voakenda ny Fahitalavitra Antserasera sy ny Tranokalam-baovao ao Venezoelà
Mpanoratra Marianne Díaz Hernández · Amerika Latina
Tsy azo nidirana nanomboka ny marainan'ny 7 Aprily ny tranonkala fantsona fahitalavira maromaro izay nandefa ny fihetsiketsehana tao Caracas.
Mihevitra Ny Handràra Tanteraka Ny Fanalànjaza i Angolà, Manohitra Izany Ireo Vehivavy
Mety hiaraka amin'ireo firenena vitsivitsy erantany izay mandràra ny fanalànjaza, na inona na inona antony amin'izao fotoana izao, i Angolà.
10 Avrily 2017
Mpitsara Breziliana Iray Mangataka ny Loharanom-baovaon'ny Bilaogera Iray, Mitsapa ny Fetran'ny Fahalalahan-gazety
Mpanoratra John Razen · Amerika Latina
Nofoanan'ilay mpitsara, Sergio Moro ny fanapahan-keviny taty aoriana, saingy nanasongadina ny fahalemen'ny rafi-dalàna fiarovana ny mpanao gazety olon-tsotra ao Brezila ny fihetsiny.
09 Avrily 2017
Mpanoratra Netizen Report Team · Amerika Latina
Nanjary fotoana iray miavaka ny fifidianana rehefa mirongatra ny sivana anaty aterineto, ny fanorisorenana anaty aterineto, ny fampielezana vaovao diso iniana atao.
07 Avrily 2017
Voamariky ny Fanapahana Tranonkala sy Fiatoan'ny Twitter ny Fifidianana Ekoadaoriana
Nahatsikaritra fihenana tampoka tamin'ny fidirana amin'ny tranonkalan'ny mpomba ny mpanohitra ireo vondrona mpiaro ny zon'ny fampitam-baovao ny harivan'ny androm-pifidianana.
06 Avrily 2017
Miketrika Hamantatra Hafatra WhatsApp sy Facebook Faikany ny Teknisianina Ambony Indiana
Maro amin'ny mpisera vaovao no tsy mbola mahay manavaka ny loharanom-baovao tena izy sy ny faikany na mpisompatra.
04 Avrily 2017
Manao Famoretana ny Mpanakana Tranonkala Rosiana Mialoha ilay Hetsi-panoherana Iadiana Amin'ny Kolikoly
Mpanoratra Isaac Webb · Rosia
Manenjika ireo mpikarakaran'ny fihetsiketsehana izay kasaina hatao amin'ny 2 Aprily ny lehiben'ny fampanoavana ao Rosia mialoha ny hetsi-panoheran'ny mpanohitra lehibe indrindra hatramin'ny taona 2011-12.
Nanome Fitaterana Maimaimpoana Ny Mpamily Fiarakaretsaka Sy Ny Olon-tsotra Taorian'ny Fanafihana Tao Saint-Petersbourg
Mpanoratra RuNet Echo · Rosia
Rehefa voatery nakaton'ny manampahefana ny metro-n'i St. Petersburg noho ny fanafihana, dia nifanampy tamin'ny fomba lehibe ireo mponina tao an-tanàndehibe.
Marary Ambavahaonan'ny Fahafatesana, Mijoro Hanao Izay Hihomehezana Ihany
Fanamby mampisy rarintsaina ho an'ny rehetra izay voakasika ny fikarakarana ny olona marary ho faty. Nampiasa hatsikana mba hizarana fiainana miaraka amin'ireo efa ho faty ny Fikambanan'ny Fitsaboana Ala-nenina Indiana.
Nahatohina an'i Maldiva ny Fahafatesana Tampoka Nahazo ilay Mpilatro Manga Maso
Hita nihantona tao amin'ny efitrano fatoriana iray iombonana tao Rajshahi, ao avaratr' i Bangladesh i Raudha Athif, mpilatro Maldiviana manga maso iray 20 taona. Tao amin'ny media sosialy, nisaona ny fahalasanan'ity vehivavy ity ireo Maldiviana